कोरियामा फेरि नेपाली माग्नेहरुको कृयाकलाप शुरु
यसपाली २ जना नेपाली चेलीहरुले माग्दै हिडेको फेला
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/8b573nepal.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
दक्षिण कोरियाको बिभिन्न सिटीहरुहरुमा राजधानी सउलका ट्रेन स्टेशनहरुमा तथा पसल पसलहरुमा नेपालका हिमालियन बालबालिकाहरुको पढाईका लागि भन्दै माग्दै हिड्ने नेपाली माग्नेहरुको कृयाकलाप फेरि शुरु भएको छ ।
आज जुलाई २३ सउलको यङदम्फो स्टेशन नजीक २ जना नेपाली चेलीहरु माग्दै हिडिरहेको देखेपछि त्यहीं नजीक बसोवास गर्ने एस् थापाले उनीहरुलाई रोक्न खोजे तर यो काम नराम्रो नभएको जिकीर गर्दै उल्टै थापालाई बोल्न समेत दिएनन् । त्यसपछि एस् थापाको फोनले मलाई फोन गर्नुभयो । मैले ती नेपाली चेलीसंग फोनमा कुरा गर्दा आफ्नो नाम बताउन चाहिनन् । कहिले निशा भन्ने कहिले ईशा भनी झुक्याउन खोजे । उनीहरुलाई त्यहाँ फेला पारेका एस् थापाले उनीहरुको कार्ड हेर्न खोज्दा पहिले थापाको कार्ड देखाउनु अनि हाम्रो देखाउंछौ भन्न थाले ।
ती मागिरहेकी चेलीसंग फोनमा करीब ७ मिनेट जति कुरा गर्दा उनले आफ्नो परिचय दिन चाहिनन् । उनलाई एकछिन् त्यहाँ कुर्नुस् तुरुन्त आईहाल्छु अनि भेटेर कुरा गरौं भन्दा उनी निक्कै बिजी भएकोले कुर्न मिल्दैन भनिन् । उल्टै मलाई कस्तो पत्रकार ? कुन पत्रिका हो ? भनी प्रश्नमाथी प्रश्न गर्न थाले । मैले भनें तपाई मलाई १० मिनेट त्यहाँ कुर्नुस् अनि म सबै भनुंला । तर मानिनन् । फोनमा भएको बार्तालाप अनुसार उनीहरु पहिले पनि थुप्रै पटक माग्दा भेटिएको हिमालयन बालबालिकाका लागि युवा सेवा संघबाट माग्दै हिडेकी रहिछन् । पहिले त्यसरी माग्दै हिड्दा भेटिएको कागजात अनुसार त्यसका डाइरेक्टर ईश्वर भट्ट हुन् ।
Himalayan Balbalika ka lagi Yuwa sewa sangh
Bhagawati bahal, Naxal, Kathmandu
ती चेलीहरु चाहिं Asia Volunteers Service Center (AVSC) बाट आएका रहेछन् । यहाँ आउन उनीहरुले २१ दिनको भिसा पाएको त्यसमध्ये १२ दिनको सेमिनारमा ब्यस्त रहेको र अहिले बाँकी दिनहरुमा यसरी नेपालका गरीब बालबालिकाहरुको लागि माग्दै हिडेको बताइन् ।
पटक पटक त्यसरी मागिहिडेको देखेपछि उचित कारवाही गरिसकेको भएपनि हालसम्म यो काम रोक्न सकिरहेको छैन । ग्वाङ्जु सिटीमा एकजना नेपाली माग्नेलाई त्यहाँका पुलिसले थुनेको थियो । होङ्गिक युनिभर्सिटीमा २ जना केटाहरुले माग्दै हिडेको फेला परेपछि तत्कालीन एन आर एन कोरियाका अध्यक्ष हालका आईसीसी प्रतिनिधी गंगाराज राई र नेपाली दूतावास कर्मचारी शुरेस लिम्बुले सबै कागजातहरु खोसिदिए र अब देखि नमाग्ने भनी माफी मागेपछि छाडिदिएका थिए । त्यसैगरि कुमी सिटीमा माग्दै हिडेको देखेपछि रोक्न खोज्दा उल्टै तर्साउन खोजेपछि त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक कारवाही गर्नुपरेको थियो । यहि समस्यालाई मध्य नजर गरी सउल स्थित नेपाली दूतावासले यस्ता कृयाकलाप गरिरहेको भेटेमा तुरुन्त पुलिसलाई बुझाउन समेत आग्रह गरिसकेको छ ।
नेपालमा गृहयुद्ध भैरहेको छ नेपाली बालबालिकाहरुले खान पाएका छैनन् लाउन पाएका छैनन् तिनीहरुलाई पढाउन सहयोग गर्नुस् भन्दै माग्ने नेपालीहरुले गर्दा कोरियामा नेपाली माग्नेहरुले गर्दा नेपालको धेरै बेइज्जत भैरहेको छ । त्यसै त कोरियनहरु नेपाललाई गरीब देशको संज्ञा दिन्छन् भने तीनिहरुको कृयाकलापबाट देशको ईज्जत कहाँ पुग्ने हो हामी आफैं अनुमान गर्न सक्छौं । त्यसैले यस किसिमको कृयाकलापलाई हामी कोरियामा बस्ने सबै नेपालीले हटाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी मध्ये जो कसैले त्यसरी मागिरहेको देखेमा तुरुन्त नजीकको पुलिस वा दूतावासलाई सम्पर्क गरी उचित कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिमालयन बालबालिकाका लागि युवा सेवा संघबाट माग्दै हिडेका काशीनाथ खनाल नामको नेपालीलाई पक्रेर एम्बेसीमा बुझाएपछि एम्बेसीले गरेको कारवाही हेर्न तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् ।